TCDD သည်အနည်းဆုံးအထက်တန်းကျောင်းသူ / သားများကိုခန့်ထားလိမ့်မည်။ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီဝယ်ယူ Make မှ TCDD အနည်းဆုံး High School တွင်ပြည်နယ်န်ထမ်း
ဝယ်ယူ Make မှ TCDD အနည်းဆုံး High School တွင်ပြည်နယ်န်ထမ်း
24 / 10 / 2018 06 တူရကီ, 15 Burdur, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ဂျော့ဘ်, အထွေထွေ, Institute, တူရကီ, TCDD
ပြည်နယ်ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနအောက်တိုဘာလ 23 2018 16 အပေါ်ထုတ်ဝေသောကြေငြာချက်အပေါ်အထက်တန်းကျောင်းများနှင့်တွဲဖက်ဒီဂရီဘွဲ့ရထဲကမြို့9လူတွေကိုစုဆောင်းအများပြည်သူပုဂ္ဂိုလ်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Kocaeli, Burdur, Denizli, အစ္စတန်ဘူလ်, Kayseri, တူရကီ, Diyarbakir, Elazig နှင့် Batman ဝယ်ယူဖျော်ဖြေနေသည်။
အလုပ်သမားစက်မှုနည်းလမ်း၏စနစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်ပြရထားလမ်းစက်ရုံပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကရိန်းအော်ပရေတာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်, လေ့ကျင့်ပါလိမ့်မယ်ဖွဲ့စည်း Get ။
Applications ကိုစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းကထုတ်ဝေပါလိမ့်မည်အောက်တိုဘာလ 26 2018 ကြော်ငြာများနှင့်တူရကီအပေါ်တရားစွဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်လက်စွဲကြော်ငြာလွန်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ကြောင်းအကြံပြုသည်အခြေအနေများသင်ယူခြင်း။
အလုပ်သမားတစ်ဦးရထားဖွဲ့စည်းခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်: ရထားစနစ်များစီးပွားရေးအသက်မွေးမှု High School တွင်, လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ရထားစနစ်များ, ရထားစနစ်များဆောက်လုပ်ရေး, ရထားစက်, ရထားစနစ်များစက်မှုလျှပ်စစ်ဌာနတစ်ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။
ယူခံရဖို့ယာဉ်စက်ရုံနှင့်ချီစက်အော်ပရေတာများအတွက်စက်မှုကိရိယာများကို: လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ရထားစနစ်များ, ရထားစနစ်များဆောက်လုပ်ရေးအသက်မွေးမှု High School တွင်, ရထားစနစ်များနှင့်ရထားစနစ်များစက်တွေဟာစက်မှုလျှပ်စစ်ဦးစီးဌာန၏ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်ရန်လိုအပ်သည်။
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းအမြင့်အီလက်ထရောနစ်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး၏ကျောင်း, တယ်လီကွန်မြူနီကေး, ဆက်သွယ်ရေး, ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ, အီလက်ထရောနစ်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဘွဲ့ရလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
လမ်းညွှန်စုဆောင်း TCDD အများပြည်သူ်ထမ်းများအတွက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
TCDD အနည်းဆုံး High School တွင် 363 န်ထမ်းဦးစီးမှူးဝယ်ယူ Make မှ (လျှောက်လွှာစတင်)
ကြောင်းဟောင်းပြစ်မှုထင်ရှား TCDD High School တွင်ထမ်းခေါ်ယူမှု Make
လုပ်ဖို့ဝန်ထမ်းဝယ်ယူကောလိပ်ကျောင်းသားTÜVASAŞ 26 လုပ်သားများ!
TCDD အထက်တန်းကျောင်းများနှင့်အမြဲတမ်းစုဆောင်းမှုစတင်ခဲ့ပြီး 108 ဘွဲ့ကြို applications များမှဘွဲ့
အလုပ်သမားချိန်းဖို့ TCDD အနည်းဆုံး High School တွင် Continues
TCDD KPSS အနည်းဆုံးကောလိပ်ကျောင်းသားအလုပ်သမားဝယ်ယူလုပ်နေတယ်ရမှတ်
ကောလိပ်ကျောင်းသား TCDD ဝန်ထမ်းရေးရာလုပ်နေတယ်
TCDD High School တွင် 13 Wagon Technician အလက်ခံတွေ့ဆုံ
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကမသန်စွမ်းပြည်သူ့ဝန်ထမ်းရေးရာဝယ်ယူ Make မှ
ဝယ်ယူ Make မှ TCDD 8 ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းရေးရာ
TCDD 170 ပို့ဆောင်ရေးပြည်သူ့ဝန်ထမ်းရေးရာအရာရှိတစ်ဦးဝယ်ယူ Make ပါ!
TCDD အထက်တန်းကျောင်းများနှင့်တွဲဖက်ဒီဂရီဘွဲ့ရအမြဲတမ်းလုပ်သားများရရှိမည် 108
၏ရထားလမ်း signal စောင့်ရှောက်မှုနှင့် Repair
နယူးကျွမ်းကျင်သူတောင်းဆို BTS Corlu ရထားမတော်တဆမှု